Akwụkwọ kachasị enyere onwe gị aka
Akwụkwọ 3 kacha mma nke Rafael Santandreu dere
Akwụkwọ ndị na -achọ ezigbo onye ahụ na -akpasukarị iwe n'obi ọbụlagodi ndị debanyere aha na post a. Ọ dị ka ịla azụ na -abịa site na nkọwa nke ụdị ụdị a dị ka mbanye n'ime atụmatụ nke aka ya, ma ọ bụ ịtọgbọ, echiche nke mmeri ...
Enweghị egwu, nke Rafael Santandreu dere
A na -atụkwa egwu anyị ụjọ, obi abụọ adịghị ya. N'ezie ihe niile bụ somatized, ihe ọma na ihe ọjọọ. Na ụzọ bụ loop na -adịghị agwụ agwụ. N'ihi mmetụta, anyị na -enwe mmetụta anụ ahụ n'ime. Site na mmetụta ahụ na -adịghị mma nke anyị na -ewepụta onwe anyị, site n'egwu, anyị nwere ike nweta ...
Breathe nke James Nestor dere
Ọ dị ka anyị na -eche mgbe niile ka onye ga -ama anyị jijiji nke ukwuu n'ịma mmụọ sị: hel, ọ nwere ike ịbụ eziokwu! N'ịchọ ịmata ihe, ihe kacha mara amara, eziokwu na -enweghị ike ịza ajụjụ bụ nke e gosipụtara anyị n'ụzọ doro anya nke doro anya. James Nestor ewerela ya ...
Akwụkwọ mkpali gị. Jiri obi ike niile mee ọhụrụ
Isi okwu a ga -abụ na onye ọ bụla nwere omume dị ka onye na -ahọrọ uwe kwa ụtụtụ (ma ọ bụ ụbọchị gara aga n'ihe banyere onye na -elepụ anya n'ihu na ịchịkwa oge ha). Mana ha bụ kpọmkwem ụdị labyrinth na ntụgharị ihu na ntụgharị na -eduga na ...
Kemgbe m gụrụ akwụkwọ ama ama nke Allen Carr banyere ịkwụsị ise anwụrụ, nkwenkwe m na abamuru nke akwụkwọ enyemaka onwe onye agbanweela nke ọma. Ọ bụ naanị ịchọta akwụkwọ ahụ nke na -enye enweghị nnọkọ ntụnye n'etiti ọtụtụ arụmụka sitere n'ihe atụ ...
Mgbe Ọgwụgwụ Dị Nso, nke Kathryn Mannix dere
Ọnwụ bụ isi mmalite nke esemokwu ndị a niile na -eduga anyị site n'ịdị ndụ anyị. Kedu otu esi enye otu ma ọ bụ chọta ịdị n'otu na ntọala nke ndụ ma ọ bụrụ na nkwubi okwu anyị ga -ala n'iyi dị ka njedebe ihe nkiri? Nke ahụ bụ ebe okwukwe, nkwenye na ihe na -abataghị, mana ọ ka bụ ...
Onye na -agba egwu sitere na Auschwitz, nke Edith Eger dere
Ọ naghị amasịkarị m akwụkwọ enyemaka onwe onye. Ihe a na-akpọ gurus taa na-ada m ka ndị chalatans nke oge gara aga. Mana… Mgbe ahụ usoro nke ...
Ogige obi gị, nke Walter Dresel dere
A na-ekwukarị na ụzọ kacha nwee obi ụtọ bụ nke na-aga site n'ọmụma onwe onye. Naanị, ka anyị ghara ịghọgbu onwe anyị, n'ọtụtụ oge anyị na -eche onwe anyị ihu nke na -anaghị akwụsị iwepụ nkpuchi nke mgbakọ, omenala, ọchịchọ na ihe niile na -eche ihu ...